Yamaha 700CC injini assy - China Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
Ikhwalithi ephezulu aluminium ufe ekubunjweni isikhunta / tooling / afe & ingxenye
Igama Brand: ngezifiso
Model Inombolo: HX10091die ekubunjweni isikhunta
Ekubumbeni Mode: Die Ukulingisa
Umkhiqizo Material: Aluminium
Umkhiqizo: Imoto Isikhunta
Ukulolonga Technics: afe asakazwe
Okufakiwe: ibhokisi Ngokhuni
Isikhunta impahla: DIEVAR, SKD61, H13,8407, njll.
isofthiwe Design: PROe, UG, CAD
isizinda Isikhunta: Standard C45
ukuphila Isikhunta: 50000shots ukuba 100000 isibhamu
Igama lomkhiqizo: izinga okusezingeni aluminium die asakazwe isikhunta
isitifiketi: ISO9001: 2008
ukwelashwa surface: ukwelashwa Heat
Beka ngayinye aluminium die asakazwe isikhunta ngebhokisi lamapulangwe
izingxenye Model HX10091
Technics udini Die ekubunjweni
kanye nezinye eziningi aluminium ingxubevange konke eyamukelekayo.
Dimension Njengoba imidwebo noma amasampula
ukwelashwa surface Sandblasting, Painting, Powder enamathela, Anodize,
lashukumisa, i-Chrome Plating, Nickel Plating, njll.
Die Isikhunta ekubunjweni Cavity Single noma amaningi
45 # steel, njll.
ukwelashwa ukushisa Lukhuni, Nitriding
isikhunta sici Umklamo ezithuthukisiwe, isakhiwo Inoveli, ngokunemba High,
Quality izinto, Long esaphila, iDemo ukulethwa isikhathi
Izinsiza kusebenza CNC ukucacisa isikhunta lokuqopha umshini, CNC ukwakha umshini,
CNC kokuphenduka, EDM, Linear ahlabayo umshini, Die zokubona umshini (200T),
Die umshini ekubunjweni (180T ~ 1250T), Lathe, Ukugaya mshini;
CMM, Material umtshina, Ukuqina kudivayisi yakho yokuhlola, spectrograph, njll.
Software CAD, UG, Pro / E, JSCAST-v8 of Japan, FLOW3D.v9.2 of America, njll
isitifiketi Quality UKAS & SGS ISO9001: 2008
Advantage Ikhwalithi Phikelela ekwenzeni yonke imininingwane ngokucophelela njalo
Inani Mhlawumbe hhayi eliphansi kunawo wonke, kodwa kumele kube ezinengqondo futhi
Delivery Ungalokothi ngemva kwesikhathi kwezidingo inkontileka
Izikhungo 1. Nomaphi futhi noma nini uma uthumela umbuzo, njalo
uthole ukuphendula kwezinsuku 2 ukusebenza.
2. Lapho unenkinga phakathi kwenqubo iphrojekthi, njalo
ukuthola inkinga nokuxazulula kuqala nge ikhasimende,
bese nithole lapho icala elikhulu liba, iqembu lethu
noma ikhasimende ohlangothini.
R & D isipiliyoni Itholakala Ngobuningi yokuhlabelela okunekhono ku asakazwe die
Ithimba States kanye nethimba omuhle
Ozibona sikholwa ngokubona, wamukelekile ukuba uvakashele inkampani yethu, nikholwe ukuthi imikhiqizo yethu futhi inkonzo ezincintisana!
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, ukwamukela uxhumane nathi. Ningbo HONGXIANG Isikhunta Imishini CO., Ltd ufuna ukuqedela amanye amaphrojekthi die asakazwe nawe ndawonye ngokuphelele.
Isiqinisekiso Nangemva Kokufunda IZwi LikaNkulunkulu-ukudayiswa Services ONE-UNYAKA yesiqinisekiso isikhathi umshini wonke ngaphandle amashubhu kanye ezibangelwe umuntu njll, izinyanga ezingu-18 kusukela ngosuku ngesikhathi namukela umshini noma 12 izinyanga uma ukufakwa eseqedile;
amasevisi umxhumanisi wonke umshini ukuphila, amahora angu-24 technical support nge-imeyili;
Sishayele ngu 86-0577-65905955 86-13356198899 ngesikhathi besebenza;
UPS-friendly English Soft-ware, imanyuwali yomsebenzisi futhi wathumela ochwepheshe for installaton & debuggin expericed
1. Ingabe umshini wakho ukuhlangabezana nezidingo zethu kahle?
Sizokunikeza isiphakamiso ngokuvumelana requirments yakho ethize. Njalo umshini amakhastama ukuhlangabezana nezidingo zakho kahle.
2. Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani?
Singabantu ifektri, senza lo mugqa iminyaka eminingi.
3. Yini indlela yakho yokukhokha?
T / T nge-akhawunti yasebhange yethu ngqo, noma Alibaba ukuhweba isiqinisekiso inkonzo, noma West Union, noma ngokheshi.
4. Singalithola kanjani uqiniseke mayelana izinga umshini ngemva sibeka oda?
Ngaphambi ukulethwa, sizokuthumela izithombe namavidiyo ukuhlola izinga, futhi ungakwazi ukuhlela ngekhwalithi kokuhlola wedwa noma oxhumana nabo lwesithathu ukuhlolwa party inhlangano.
5. Siyesaba ngeke usithumelele umshini ngemva sikuthumelela imali?
Sicela uqaphele ilayisensi yethu ibhizinisi ngenhla kanye nesitifiketi. Futhi uma ungenalo ukwethemba kithi, bese singasebenzisa Alibaba ukuhweba isiqinisekiso inkonzo noma inkokhelo LC, ukuqinisekisa imali yakho.
6. Kungani kufanele ukhethe inkampani yakho?
Singabantu professtional imishini nokupakisha iminyaka eminingi, futhi sinikeza kangcono emva-sales
inkonzo. Wena isiqinisekiso akukho ukuphila kwabo engozini ngoba idili yethu.
7.Need imishini imininingwane noma amavidiyo amaningi?
Sicela uxhumane Mr.Jim ngqo!
Siphinde ukwazi oyifisayo imishini ngokuvumelana imininingwane yakho ngokufunwa, ezifana nokupakisha
isivinini, isikhwama obuphelele, umkhiqizo max okusezingeni eliphezulu, njll Hope ukubambisana nawe esikhathini esizayo esiseduze!
Isiqinisekiso Nangemva Kokufunda IZwi LikaNkulunkulu-ukudayiswa Services ONE-UNYAKA yesiqinisekiso isikhathi umshini wonke ngaphandle amashubhu kanye ezibangelwe umuntu njll, izinyanga ezingu-18 kusukela ngosuku ngesikhathi namukela umshini noma 12 izinyanga uma ukufakwa eseqedile; Amasevisi umxhumanisi wonke umshini ukuphila, amahora angu-24 technical support nge-imeyili; Sishayele ngu 86-0577-65905955 86-13356198899 ngesikhathi besebenza; UPS-friendly English Soft-ware, umsebenzisi bhukwana bese uthumela ochwepheshe expericed ngoba installaton & debuggin 1. Ingabe umshini wakho ukuhlangabezana nezidingo zethu kahle? Sizokunikeza isiphakamiso ngokuvumelana requirments yakho ethize. Njalo umshini amakhastama ukuhlangabezana nezidingo zakho kahle. 2. Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani? Singabantu ifektri, senza lo mugqa iminyaka eminingi. 3. Yini indlela yakho yokukhokha? T / T nge-akhawunti yasebhange yethu ngqo, noma Alibaba ukuhweba isiqinisekiso inkonzo, noma West Union, noma ngokheshi. 4. Singalithola kanjani uqiniseke mayelana izinga umshini ngemva sibeka oda? Ngaphambi ukulethwa, sizokuthumela izithombe namavidiyo ukuhlola izinga, futhi ungakwazi ukuhlela ngekhwalithi kokuhlola wedwa noma oxhumana nabo lwesithathu ukuhlolwa party inhlangano. 5. Siyesaba ngeke usithumelele umshini ngemva sikuthumelela imali? Sicela uqaphele ilayisensi yethu ibhizinisi ngenhla kanye nesitifiketi. Futhi uma ungenalo ukwethemba kithi, bese singasebenzisa Alibaba ukuhweba isiqinisekiso inkonzo noma inkokhelo LC, ukuqinisekisa imali yakho. 6. Kungani kufanele ukhethe inkampani yakho? Singabantu professtional e ukupakisha imishini iminyaka eminingi, futhi sinikeza emva-sales service kangcono. Wena isiqinisekiso akukho ukuphila kwabo engozini ngoba idili yethu. 7.Need imishini imininingwane noma amavidiyo amaningi? Sicela uxhumane Mr.Jim ngqo! Siphinde ukwazi oyifisayo imishini ngokuvumelana imininingwane yakho ngokufunwa, ezifana nokupakisha isivinini, isikhwama obuphelele, umkhiqizo max okusezingeni eliphezulu, njll Hope ukubambisana nawe esikhathini esizayo esiseduze!
Previous: inhlangano izindlu Yamaha 149
Okulandelayo: Yamaha izingxenye
Aluminium Die Cast Isikhunta
Aluminium Die Ukulingisa
Die Aluminium Sakaza
Die Ekubunjweni Aluminium
KIA uwoyela sump
Automobile valve umzimba
Japan Isuzu ikhava igiya icala
Guangyang 50 injini inhlangano
Sweden lokuphotha autolive e ibhande ukuphepha
Suzuki bamba ikhava LH